အင်ဒိုနီးရှားမှာ ၈.၉ စကေး ငလျင်လူပ် breaking news | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အင်ဒိုနီးရှားမှာ ၈.၉ စကေး ငလျင်လူပ် breaking news
Posted by ကထူးဆန်း on Apr 11, 2012 in News, South East Asia | 50 comments
ညနေ ၃ နာရီကျော်က အင်ဒိုနီးရှားမှာ ငလျင် ၈.၉ စကေး လူပ်သွားပါသည်။ ဆူနာမိ အန္တရယ် အချက်ပေးထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း စောင့်ကြည့်နေကြရပါသည်။
http://www.facebook.com/ElevenMediaGroup မှာ သွားဖတ်ကြပါ။
အင်ဒိုနီးရှား ဘန်ဒါပါချေး ရဲ့ ၄၅၀ ကီလိုမီတာ အဝေးမှာလို့ပြောပါသည်။ ယခင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဆူနာမိ ငလျင်ထက် ၃ ဆ ပိုနက်သော နေရာတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ရသော သတင်းများ တင်ပေးစေလိုပါသည်။
Credit to ဒေါက်တာထွန်းလွင်
စူနာမီ စိုးရိမ်စရာ မရှိတောဘူးလို့ သိရပါတယ်..
ငလျင်က အလျားလိုက် မလှုပ်ဘဲ ဒေါင်လိုက် လှုပ်သွားလို့ရေလှိုင်း အကြီးကြီးတွေ ဖြစ်မသွားခဲ့ဘူး လို့ သိရပါတယ်.
အသေအပျောက် ထိခိုက်မှုလဲ မကြားရပါဘူးတဲ့.ဗျာ
ဆူနာမီအရေးပေါ်ကြေငြာချက်နှင့် ဆူနာမီလှိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှု မိနစ်အလိုက် သတင်းများ
… SITTWE 20.0N 92.9E 1226Z 11 APR (ည ၆း၅၆)
(ကိုးကား – အလဲဗင်းမီဒီယာနှင့် အင်တာနက် သတင်းများ)
အဲဒါဆိုရင်တော့ အရင်ကလောက်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးမှတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့စောင့်တော့ကြည့်ရမှာပေါ့။ ဒီတခါ CJ ကြီးတယ်မြန်ပါလား။ အခုမှ ၄ နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်
ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ ကမ်းခြေ သင်္ကြန် သွားတဲ့ လူတွေ ဒုက္ခများကုန်တော့မှာပဲ
ပုံကြည့်ရတာ… မြန်မာပြည်ဖက်ပင်လယ်ကမ်းနားတွေ.. အန္တရယ်ရှိနိုင်ပါတယ်..
Updated at 6:06 a.m. ET
(CBS/AP) BANDA ACEH, Indonesia – A tsunami watch was issued for countries across the Indian Ocean afteralarge earthquake hit waters off Indonesia on Wednesday, triggering widespread panic as residents along coastlines fled to high ground in cars and on the backs of motorcycles.
Some were crying. Others screamed “God as great” as they poured from their homes. In Banda Aceh, Aceh’s main provincial city, Indonesia’s Disaster Mitigation Agency said the power was out as sirens and Koran recitals were heard from mosques around the city.
The U.S. Geological Survey said the 8.7-magnitude quake was centered 20 miles beneath the ocean floor around 269 miles from Aceh’s provincial capital.
၈.၆ စကေးလို့ ပြန်ပြောပါသည်။ မြန်မာ့အသံမှလည်း သတိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ကြောင်းသိရပါသည်။
Expert on Tsunami: One expert told the BBC the quake asa“strike-slip” fault, meaningamore horizontal shift of the ground under the sea as opposed toasudden vertical shift, and less risk ofalarge displacement of water triggeringatsunami.
လှုပ်ပုံအရ.. ဆုနမိကြီးဖြစ်ဖို့.. အန္တရယ်နည်းပါတယ်တဲ့..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. သတိထားသင့်ပါတယ်..။
ဆူနာမိဝမ်နင်ဌာနတွေကလည်း လူတွေ အလွယ်တကူနားလည်အောင် မလုပ်ကြဘူး ။
http://ptwc.weather.gov/ptwc/text.php?id=indian.TSUIOX.2012.04.11.0845 မှာ မြန်မာပြည်ရောက်မဲ့ ခန့်မှန်းချိန်ကို
YANGON 16.5N 96.4E 1507Z 11 AP
အဲ့ဒီက ၁၁၄၉z ဆိုတာ ရောက်မဲ့ အချိန်ရေးထားပြီး ဘယ်လိုဖတ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်။ သိသူများ ပြောပြကြပါဦး။
ဖြစ်တဲ့ အချိန်ကိုတော့ ၀၈၄၅Z လို့ ရေးထားတော့….. စိတ်လေတယ် ။ ဒေသစံတော်ချိန် အဖြစ်ရေးပေးလိုက်ရင် တွေ့သူတိုင်းသိမယ် ။ အခုတော့ ရမ်းတုတ်နေရသည်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဘဲ ရှာတွေ့သွားပြီ ။ ၀၈၄၅Z ဆိုတာ UTC (GMT) ဆိုတော့ မြန်မာပြည်ကို ရောက်မဲ့ အချိန်က .
CHEDUBA_ISLAND ၁၈.၂၀ နာရီ
PYINKAYAING ၁၈.၂၀ နာရီ
SITTWE ၁၈.၅၆ နာရီ
MERGUI ၁၉း၄၆ နာရီ
YANGON ၂၁း၃၇ နာရီ
သင်္ကြန်ဆို အထက်က လူတွေက အောက်ဆင်း အောက်က လူတွေက အထက်တက် နဲ့ အိမ်မှာကို နေကြတာ မဟုတ်ဘူး။
ပိတ်ရက်မှ လည်ပတ်ရတာ ဆိုတော့.. စိတ်တော့ ပူစရာ ကောင်းတယ်။
ူယိုးဒယား ဖူးခက်မှာတော့ လေယာဉ်ကွင်းပိတ်လိုက်ပြီး သူတို့ ကမ်းခြေမှာ ရေနဲနဲဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ် . patong beach မှာတော့ လူတွေကိုဘေးကင်းရာရွေ့ခိုင်းတယ်လို့ သိရပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားမှာ ၈.၂ စကေးနဲ့ မကြာခင်က aftershock ထပ်လူပ်တယ်လို့ CNN မှ ကြေညာပါသည်။ အနက်ကလည်း ၁၆ km မှာဟုသိရပါသည်။
သေပြီ ဆရာ ။
ကျုပ်က ကျောက်ဖြူမှာ ။
ကို nigimi77 ခင်ဗျား
ကမ်းခြေနဲ့ မီတာ ၈၀၀ အကွာမှာရောက်အောင်နေပါ
အနည်းဆုံး အမြင့် ၃၃ ပေ ကျော်တဲ့နေရာကို ရှာထားပါတော့ဗျ
update news အတွက် ကျေးဇူး စီဂျေကြီး..
အားလုံး အသက်ဘေးက အချိန်မီ ရှောင်ရှားလွတ်မြောက်ကြပါစေဗျား..
အမလေး အခြေအနေက ပိုဆိုးလာတာလား..
သူငယ်ချင်းက ကမ်းခြေမှာ သင်္ကြန် နွဲမလို့တဲ့.. ဖုန်းဆက်ပြောတာလည်း ဆက်လို့ မရသေးဘူး။
မဖြစ်လောက်ဘူးလို့တော့မှန်းရတာဘဲ . ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း အရင်လောက် မကြီးနိုင်ဘူးလို့ဆိုနေပါတယ် ဆူးရေ.
နောက်ထပ် ၈.၁ နဲ့ ၆.၁ ထပ်လှုပ်သွားပါသေးတယ်တဲ့ ။ ၀မ်နင်တော့ ရုတ်သိမ်းမှု့ မရှိသေးပါဘူး ။
ချယ်ရီ FM က အခုပဲ သတိပေး ကြေညာချက် လာသွားတယ်။ ခဏခဏ သတင်း အသစ်ရရင် ထပ်လွင့်မယ် ပြောသွားတယ်။
ဖူးခက်ကို မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၇း၄၅ လောက်မှန်းထားတာ အခုထိ ဘာမှ မဖြစ်သေးဘူးလို့သိရပါသည်။ ရောက်ချိန်တန်ပြီးနောက်နှစ်နာရီလောက်မှ ၀မ်နင်ရုတ်သိမ်းမှာမို့ နောက်နှစ်နာရီလောက်တော့ စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်။
ချက်ချင်းအစီအစဉ်ဖျက်ပီး အင်တာနက်ဆိုင်ထွက်လာပီး သတင်းတွေစောင့်ကြည့်နေတာ..
မိုက်မျိုးတုန်းတော့မလို့နဲနဲပဲလိုပါကလား..
weekly eleven မိနစ်အလိုက်သတင်းများ 6း29
ဆူနာမီနှင့် ပတ်သတ်၍ ဦးကျော်ထွန်း၊ ဘူမိဗေဒပညာရှင်၏ သုံးသပ်ချက်
အခု လှုပ်တဲ့ ငလျင်က ဆူနာမီကို အခြေခံပြီး လှုပ်တဲ့ ငလျင်ပဲ။ ၂၀၀၄ တုန်းကလည်း လှုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ၉ ဒသမ ၁ အင်အားရှိတယ်။ အခုက ၈ ဒသမ ၇ ဆိုတော့ တအားပြင်းထန်တယ်။ အခုငလျင်နဲ့ ဆပ်စပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ မြေလွတ် မြေပျော့တွေရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ သတိထားရမယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အတွက် မြေမျက်နှာပြင် ၁၄ ဒီဂရီအောက် နိမ့်တဲ့ နေရာတွေ စိုးရိမ်ရတယ်၊။
မြန်မာနိုင်ငံကို ဆူနာမီ ဘယ်လောက်ထိ လာနိုင်မလဲဆိုတာတော့ သေချာမသိသေးဘူး။
် ဆူနာမီကာကွယ်ရန်ပြင်ဆင်မှူများ ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာကမ်းခြေများမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ချောင်းသာကမ်းခြေတွင်ရောက်ရှိနေ သည့် ဧည့်သည်များအား ငလျင်လှုပ်ခတ်အပြီးတွင် သက်ဆိုင်ရာဟိုတယ်များ
အလိုက် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်မှုကြောင့် ယခုအချိန်တွင်
ကမ်းခြေမှာရှင်းလင်းသွား ပြီး ပင်လယ်အတွင် ရောက်ရှိနေသည့် စက်လှေများလည်း ကမ်းခြေသို့ပြန်လည်ဆိုက်ကပ်ထားကြကြောင်း ချောင်းသာ ဟိုတယ်များမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“၃နာရီလောက်မှာ ငလျင်လှူပ်တော့ CNN မှာသတိပေးချက်တွေ့တာနဲ့အကုန်လုံးကမ်းပေါ်ပြန်တက်ကြဖို့ခေါ်တယ်။ တစ်ချိူ့ဧည့်သည်တွေကတော့ မယုံကြဘူး” ဟု ချောင်းသာကမ်းခြေ bell resort ဧည့်ကြိုကောင်တာမှတာဝန်ကျ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးကပြောသည်။
” ခု Amazing ဟိုတယ်ကတော့သူတို့ဟိုတယ်
က ဧည့်သည် ၉၂ ယောက်ကို ရွှေ့ဖို့ ချက်ချင်းလုပ်နေကြတယ်။ တခြားဟိုတယ်တွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာက သတိပေးနေတယ်” ဟုငပလီကမ်းခြေသို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည့် 7day news သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ဟိုတယ်တွေအားလုံးတော့ပိတ်လိုက်ပြီ “ဟု ငပလီကမ်းခြေသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားသည့် 7day news သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ကိုဆန်းရေ ၊ အနော်တို့ အတွဲကတော့ နက်ဖန်အတွက် ဖလိုက်လက်မှတ်တွေ ကို ပလုံပစ်လိုက်ပြီခင်ဗျ ။ မဖြစ်ခင် ကြိုရှောင်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါဘဲနော
ကိုပေရေ .. ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင်တော့ မပလုံ သင့်ပါဘူး ။။ ဖြစ်ပြီးကာစ က ပိုစိတ်ချရ တတ် တယ်ဗျ။ သွားသာသွားပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်သာဆိုသွားမှာဘဲ ။။ :grin:
ကိုကြီးမိုက်လည်း သွားသာ သွားဗျို့ ..
ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံ အရ မုန်တိုင်းတိုက်ပြီးကာစ တို့ မှာ ထပ်မဖြစ်ဘူး
ဗျ ။ Aftershock ၇ှိတယ်ဆိုပေမဲ့ ပထမ တစ်ကြီမ်လောက် မပြင်းတတ်တော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းသွားနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါသည်။
ွGood News. Pacific Tsunami Warning Center has cancelled the warning for Thailand andanumber of other countries.
ကျန်းမာ ချမ်းသာရာ ရပါစေဗျား….၊
ခလုပ် မထိ ဆူးမညိ ကြပါစေနဲ့ အန္တရာယ် ကင်းကြပါစေလို့ပဲ
့ဖယ်တဲ့ အထဲမှာ မြန်မာပြည်လည်း ပါတယ်ဗျို………..
မတော် ချောင်းသာများထွက်ဖြစ်ရင် ဒုက္ခ
ရွာစားတို့သတင်းမေးလိုက်ကြပါဦးဗျို့ 
အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်သတဲ့…. ကိုယ်ပိုင်အတွေး ကိုယ့်စဉ်းစားဥာဏ်လေးရှိသလောက်
ကာကွယ်သမှု ပြုသင့်ပါတယ်… ကမ်းခြေကိုသွားမဲ့ မိတ်ဆွေများ အခြေအနေ ငြိမ်သက်
တော့မှ သွားရင်လဲ နောက်မကျသေးပါဘူး…
ကိုကြီးမိုက် ပြောသလို ဝေးဝေးရှောင်ထားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲဗျား….။
Oops……….. ကြားရတဲ့သတင်းစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ … ။
ဒီအချိန်မှာ အသေပျောက်နည်းပါးအောင် အစိုးရရောမီဒီယာတွေနဲ့ အခြားပြင်တွင်းမီဒီယာတွေကနေ သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်သင့်တယ်….. ။ ဒါမှလည်း အခြေနေမှန်ကိုသိပြီး အသက်အန္တရာယ်နဲ့ ဆုံးရှုံးမှု နည်းမှာပါ…. သင်္ကြန်အချိန် ကမ်းခြေသွားမယ့်လူများလည်း …. အစီစဉ်ဖျက်သင့်ပါတယ် ….. ။
ပညာရှင်များပြောပါတယ်။ငလျှင်က ပင်လယ်ကြမ်းပြင်အောက်အလျှားလိုက်ဖြစ်တာမို့သူကြီးပြောသလို သိပ်စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးးဒေါင်လိုက်ငလျင်က ပိုပြီးဆူနာမီလှိုင်းကြီးတတ်တယ်လို့ ပညာရှင်များပြောပါတယ်
လဲမြို့ ထဲဖက်ရွှေ့ ပြောင်းထားကြတယ်။ခုတော့ အေးဆေးနေပါပီ။
သံတွဲမြို့နဲ့ရေမိုင် ၁၅ မိုင် အကွာခန့်ရှိတဲ့ ကျွန်းနံ့သာကျွန်းမှာ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု
ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် … ဒီနေ့ညနေ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်က ပါ …
မီးတောက်တွေက တနာရီတကြိမ်ခန့် ကောင်းကင်ပေါ်ထိုးတက်နေတာ မြင်နေရပါတယ်…
ပြာမှုန်တွေကလည်း ကောင်းကင်မှာ ထူထပ်ပြီး မဲမှောင်နေပါတယ်…
မီးတောင်ပေါက်ကွဲနေပုံကို လေ့လာချင်သူများအတွက် Link ပါ….။
Thx.U Gipsy.Where’re you now?
Nice news for us!
အင်ဒိုနီးရှား ငလျှင်ကတော့ ဒီတစ်ခါ ဘာ အသေအပျောက်မှနဲ့ ကြီးကြီးမားမား ပျက်စီးမှု့ မရှိဘူးလို့သိရပါသည်.။
ယနေ့ မနက်တော့ မက်ဆီကိုနိုင်ငံမှာ ပြင်းအား ၇ နဲ့ ပစိဖိတ် ကမ်းခြေနား ကုန်းပေါ်ကိုဗဟိုပြုလှုပ်သွားသည်ဟု CNN သတင်းနားထောင်လိုက်ရပါသည်။ ကုန်းပေါ်မှ ဖြစ်လို့ ဆူနာမီ ၀မ်နင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူး။
သံတွဲ ငပလီကနေရေမိုင်(၁၅)မိုင်ဝေးတဲ့ ကျွန်းနံ့ သာနားက ပေါက်ကွဲ ပြာမှုတ်နေပုံ movie fileလေးပါ။
ဘာမှတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ငါးဖမ်းလှေတွေတောင်မှ ညဖက်ပြန်ထွက်ကြပါတယ်။
ပြဿနာ မဖြစ်သလောက်ပါဘဲ။တစ်ချို့ ငါးဖမ်းလှေတွေက နီးရာချောင်းတွေ